2076 फाल्गुन 12, सोमबार
महिला निर्माता–निर्देशकलाई फिल्म रिलिज गर्न गाह्रो कि सजिलो ?
बर्षा बस्नेत | प्रकाशित: २०७५, जेष्ठ १४, सोमबार
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा धेरै महिला कलाकार देखिएका छन् । चलचित्र निर्माण र निर्देशन दुवैमा महिलाले सफलता पनि पाएका छन् । तर, चलचित्र प्रदर्शन गर्न भने महिलाहरूलाई पुरुषको भन्दा पनि बढी चुनौती र गाह्रो हुने देखिन्छ । यसको उदाहरण थुप्रै छन् । महिला निर्माता भएकै कारण हल सञ्चालक र वितरकले समेत हेप्ने गरेको गुनासो सुन्न पाइन्छ । केही समय अघि चलचित्र ‘हिरोज्’की निर्मात्री पूर्णिमा लामा मिडियामा रुँदै आफूलाई हल सञ्चालक, वितरक साथै सेन्सर बोर्डमा समेत दुःख पाएको गुनासो सुनाएकी थिइन् ।
अझ, अर्को शक्तिशाली पुरुष निर्माताको चलचित्रसँग जुध्ने अवस्था आयो भने त महिला निर्मात्रीलाई चलचित्र रिलिज फलामको चिउरा चपाए सरह हुन्छ । यस्तै भएको थियो अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई कान्छी प्रदर्शनको समयमा । चलचित्र कान्छीले आफ्नो प्रदर्शन मिति २०७४ माघ २६ मा तय गरेको थियो । तर सोही मितिमा अभिनेता अनमोल केसीको अभिनय र निर्माताद्वय भुवन केसी र सुवास गिरीको निर्माण रहेको ‘कृ’ पनि रिलिज हुने भएपछि केही दिन सिनेमा नगरी गर्माएको थियो । ‘कृ’ ले आफ्नो प्रदर्शन मिति सार्न नमानेपछि बाध्य भएर श्वेताले कान्छीको प्रदर्शन मिति एक साता पछि सारेकी थिइन् । उनले केही मिडियामा आफू महिला भएको कारण नै दुःख पाएको समेत बताएकी थिइन् । श्वेताले आफू महिला भएकै कारण कृका निर्माताले हेपेको आरोप लगाएकीथिइन् ।
गत वर्ष महिला निर्माता र निर्देशकले बनाएका आधा दर्जन बढी चलचित्र प्रदर्शन भए । जसमा पूजा शर्माको निर्माण रहेको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’, झरना थापा निर्देशित ‘ए मेरो हजुर २’, दिपाश्री निरौला निर्देशित ‘छक्का पञ्जा २’ लगायतका केही चलचित्र सुपरहिट बने । चलचित्र ‘प्रेमगीत’ बाट चर्चामा आएकी नायिका पूजा शर्माले पहिलो चोटि चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट निर्माणमा हात हालेकी थिइन् । चलचित्र छायाङ्कन सुरु हुने दिनदेखि प्रदर्शन भएसम्म पूजाले आफू महिला भएको कारण हेपाइ खानु नपरेको बताउँछिन् । भन्छिन्–‘सायद म पहिलो लक्की निर्मात्री हुँ, जसले दुःखभन्दा बढी साथ पायो ।’ चलचित्र छायाङ्कनको क्रममा होस् या प्रदर्शनको समयमा मिडियादेखि हरेक व्यक्तिबाट सहयोग पाएँ ।’ पूजाका अनुसार, आफूले गर्ने व्यवहारबाट नै अरूले गर्ने व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शर्मा भन्छिन्–‘हामीले यो क्षेत्रमा कोसँग कसरी व्यवहार गर्नेमा फरक पर्छ । महिला हो भनेर आफूलाई कमजोर सोच्ने हो भने दुख पाइन्छ ।’
पूजाका यी शब्दमा अर्की अभिनेत्री झरना थापाको पनि भनाई दुरुस्तै मिल्छ । उनी पनि स्वयम् आफूले यस्तो कुराहरू नभोगेको बताउँछिन् । झरनाले एक दशक भन्दा बढी समय अभिनयका मार्फत चलचित्रमा बिताइन् । जसलेगर्दा उनलाई चलचित्र निर्माण गर्न गाह्रो भएन । यस्तै, उनको साथमा पति सुनिलकुमार थापा पनि हुनुले उनलाई फाइदा भएको छ । उनले गत वर्ष ‘ए मेरो हजुर २’ निर्देशन गरिन् । तर अभिनय होस् या चलचित्र निर्माण गर्दा महिला भएको कारण हेपिनु नपरेको झरना बताउँछिन् । ‘आफूमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ । कसैले हेप्न सक्दैन,’ झरना थप्छिन्, ‘यी सबै कुरा आफू स्वयंमा पनि भर पर्छ । कोसँग कसरी प्रस्तुत हुने ? आफ्नो स्वाभिमान बिर्सिनु हुन्न । राम्रो काम गरेको छ भने डराउनु भएन ।’ चलचित्रको निर्माण र निर्देशनमा केही महिलाहरू लागिरहेका छन् भने केही हराइसकेका छन् । चलचित्र निर्माणगर्दा कोही महिला निर्मात्री तथा निर्देशक हेपिएको बताउँछन् त कतिपयले आफूले त्यस्तो अवस्था नभोगेको बताउँछन् । चलचित्र जसले निर्माण वा निर्देशन गरे पनि त्यसले एउटा ब्रान्ड बनाउन आवश्यक छ । दर्शकमा चलचित्र हेर्नका लागि उत्सुक बनाउन सकेको खण्डमा महिला वा पुरुष भएकै कारण भेदभाव हुँदैन ।
तस्बिरमा 'सेन्टी भाइरस'ले दिएको खुशी (फोटो फिचर)
‘धुलो’को आइटम गीतमा सुकुम्वासी सपना(भिडियो)
तस्बिरमा हिट प्रियंका र आयुष्मानको ब्याचलर पार्टी
वर्षको तेस्रो ठुलो ओपनर 'सेन्टी भाइरस' !
पलको जन्मदिन 'म यस्तो गीत गाउँछु २' टिमसँग(फोटो फिचर)